डेंगुका बिरामीलाई कस्तो आहार खुवाउने ? - SandeshBahak
यौन स्वास्थ्य विचार
डेंगु एक स्वयं/सीमित संक्रामक भाइरल रोग हो। यद्यपि डेंगुका बिरामीहरूको लागि उचित चिकित्सा स्याहार आवश्यक छ तर डेंगु ज्वरोको कुनै खासउपचार छैन। डेंगुले धेरै मध्यमदेखि गम्भीर लक्षणहरू निम्त्याउँछ।
किन डेंगु ज्वरो उपचारको लागि उचित आहार अनुसरण गर्नु आवश्यक छ ?
निम्नलिखित कारणहरूले गर्दा आवश्यक छ,
डेंगुबाट ग्रस्त हुँदा के खानुहुन्छ ?
तरल डाइट डेंगु ज्वरोको सुरुवाती चरणमा किन सुझाव दिइन्छ ?
तरल आहार निम्न कारणको लागि सिफारिस गरिएको छ–
के पिउने ?
नरिवलको पानीः कागती पानीःसुन्तलको रस
कालो अंगुरको रस : यो रगतको लागि उपयोगी छ। यो एन्टिअक्सिडन्टमा पनि धनी छ। अंगुर राम्रोसँग धुल्न नबिर्सनुहोस्। अंगुरलाई नुनपानीमा राख्नुहोस् र त्यसपछि बगिरहेको पानीमा धुनुहोस्।
डेंगु ज्वरो उपचा/ चरण २ : सफ्ट डाइट दिशानिर्देश
जब बिरामीहरू डेगु संक्रमणबाट मुक्त हुन थाल्छन् र तरल डाइटले राम्रोसँग सहन गर्न थाल्छन्। उनीहरुलाई नरम आहार दिइन्छ। नरम डाइटमा यी खाद्य पदार्थ समावेश हुनुपर्छ–
डेंगु ज्वरो उपचार/चरण : सामान्य आहार दिशानिर्देश
२८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १०:१४ March 12, 2019 Sandesh Bahak
३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०६:०८ March 16, 2019 Sandesh Bahak